महाकाव्य रत्न | Coinfalls क्यासिनो
यो Scratchcard खेल संग, खेलाडीहरू मा क्लिक गर्नुहोस् छन् 40 तिनीहरूले घर स्क्रिनमा हेर्न भनेर रत्न. एकपटक तपाईंले प्ले बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, प्रत्येक खेलाडीहरू के छ हेर्न मणि प्रत्येक मा क्लिक गर्न हो. त्यहाँ छन्4रत्नहरू मा अनियमित लुकेका छन् कि बारुद; खेलाडीहरू तिनीहरूलाई क्लिक गर्नुहोस् त खेल तत्काल अन्त गर्न आउँछ. अर्कोतर्फ, यदि खेलाडीहरू मा क्लिक गर्नुहोस् 36 यो खान त खेलाडी दिइनेछ जीत क्लिक बिना रत्न.
यो खेल को मुख्य गेमप्ले तपाईं क्लिक कि रत्न निर्भर छ. यो आफ्नो भाग्य मा निर्भर छ कि एक मौका आधारित खेल हो, त्यहाँ छन् त तपाईं अत्यंत ध्यान संग हरेक हीरा क्लिक निश्चित लागि खेल समाप्त सक्ने केही. त्यहाँ छन् 40 स्क्रिन र खेलाडी मा रत्न को मणि महाकाव्य रत्न Scratchcard खेल तिनीहरूलाई लागि छ के हेर्न प्रत्येक क्लिक छ.
महाकाव्य रत्न विकासकर्ता बारे
महाकाव्य रत्न Gamevy द्वारा विकसित गरिएको छ जो iGaming उद्योग मा अग्रणी खेल विकासकर्ता को छ, तिनीहरूले गुणवत्ता संग खेल बनाउन र खेलाडीहरू रमाइलो गर्न को लागि गुणवत्ता क्यासिनो खेल बनाउन एक लाइसेन्स आपूर्तिकर्ता हो.
त्यहाँ महाकाव्य रत्न प्ले गर्दा खेलाडीहरू मनमा राख्न आवश्यक छ कि केही नियमहरू छन्:
खेल सुरु गर्नु अघि, पहिलो खेलाडी आफ्नो शर्त राख्न आवश्यक. एक ठूलो हद सम्म शर्त आकार निर्णय जितको रकम यसैले खेलाडी बुद्धिमानीपूर्वक सबै भन्दा राम्रो रकम चयन गर्न आवश्यक छ.
स्क्रिनमा, को Jackpot रकम प्रदर्शित हुनेछ, कि Jackpot राशि राशि खेलाडी उहाँले स्थानहरूलाई कि शर्त संग जीत सक्छ
त्यहाँ छन् 40 रत्न प्लेयर सामना गर्न छ र4बारुद.
यो मणि जनक तपाईंलाई क्लिक को मणि एक मणि वा मेरो हो भने प्रदर्शित हुनेछ छ. प्लेयर यो गायब हुनेछ भन्ने मणि क्लिक तर मेरो क्लिक यदि यो सम्पूर्ण खेल समाप्त हुनेछ भन्ने भने.
यो Scratchcard खेलमा, प्लेयर नगद बाहिर गर्न आफ्नो winnings कुनै पनि समयमा विकल्प छ. यो थप जीत खेलाडीहरू लागि तत्काल जीत गेमप्ले सुविधा एक रोचक खेल हो.
Coinfalls क्यासिनो मा महाकाव्य रत्न तल्लीन र यो क्यासिनो खेल लागि छ के देख्न. अगाडि जानुहोस् र आज यो क्यासिनो खेल खेल्न!